2010 | साहित्यः जीवनको निम्ति
एकाबिहानै मोबाइलमा message को टोन बज्यो । आँखा मिच्दै पढ्ने कोसिस गरेँ, 'happy birthday'। मोबाइललाई थिचेर सिरानीमुनि फेरि निदाउने कोसिस गरेँ । मोबाइलको क्यार् क्यार् रोकिएनँ । उठेँ, हाइ काढ्दै र लागेँ नित्य कर्ममा ।
बिहानै उठेर net बाट चियाउने बानी नै भैसक्यो । अनुहारलाई पानीले पखालेर कम्प्युटर अघिल्तिर बसेँ र सुरु गरेँ नयाँ दिनको यात्रा facebook.com बाट । log in गरेको के थिएँ, message र notification को थुप्रो लागेको रहेछ । पहिलो message मा click गरेँ । लेखिएको थियो, 'happy birthday'। पढ्दै जान्छु त सबैजसो message मा उही कुरो । ह्या, दिक्क लाग्यो । message लाई छोडेर लागेँ प्रोफाइलतिर । आफ्नो wall देखेर ट्वाल्ल परेँ । screen मा देखिने जति wall 'happy birthday'ले भरिएको रहेछ । मैले के गर्दिएको थिएँ र मेरो जन्मदिनमा यति खुसी भएका यिनीहरू ?
सोच्दासोच्दै आफैँभित्र हराएँ । मैले केही मेहनत नगरिकनै २६ वसन्त पार भैसकेछन् । पृथ्वीमै बसेर सूर्यलाई २६ फन्का मारिसकेछु । तर यसमा मेरो थोप्पो देन छैन । मलाई हुर्काउन आमाले दुःख झेल्नुभयो । बुबाले कष्ट सहनुभयो । दाइले मेहनत गर्नुभयो । म मूला, बसी बसी २६ वर्ष कटाएछु । खायो, खेल्यो, बढ्यो, त्यत्तिकै उमेर चढ्यो ।
सोचेँ, खुसी हुनुपर्ने गरी मैले केही गरेकै छैन । भनौँ, गर्न भ्याएको छैन वा गर्न पाएको छैन । अझ भनौँ, जे गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न सकेकै छैन । अझ पनि आमाकै काखमा हुर्किरहेको छु । बुबाकै छत्रछायाँमा बढिरहेको छु । छोरा भएर न छोराको कर्तव्य पूरा गर्न सकेको छु । न त मानव हुनुको नाताले नै कुनै जिम्मेवारी वहन गर्न सकेको छु । बलिया भएका छन् पिँडौला, दरा भएका छन् पाखुरी, तर उपयोग गर्न सकिएकै छैन ।
नलडेको हैन, लडिरहेकै छु । नहिँडेको हैन, हिँडिरहेकै छु । तैपनि लक्ष्य भेटेकै छैन । सपनाको प्यास मेटेकै छैन । अनि जन्मिएको सार भेटिएकै छैन भने उमेर चढ्दैमा किन रमाउनु ? शरीर बढ्दैमा किन खुसी मनाउनु ?
कुनै ठूलो दुर्घटना टरेर हैन
काल टाउकैबाट तल झरेर हैन
गम्भीर रोगबाट मुक्त भएर पनि हैन
जन्मेर ठूलै उपलब्धि पाएर पनि हैन
साथीहरू खुसी छन् मात्र म धरतीमा झरेकोमा
साथीहरू दंग छन् मात्र मेरो जन्मदिन परेकोमा ।
व्यथाले छट्पटिँदा मेरी आमा
साथ दिने क्वै थिएन,
धरतीमा पाइला टेकेको दिन
शुभकामना जन्मदिनको कसैले दिएन
'Happy Birthday' भन्दा कसैले,
आफ्नो उमेर गन्दा कसैले
खुसी हुनुपर्थ्यो मन,
खुसी हुनै मानेन
'Thank U' भन्न जानेन ।
खाएरै, खेलेरै बढ्यो ज्यान,
समयसँगै चढ्यो उमेर,
उमेरसँगै प्रगति भएकै छैन
आफ्नै लागि संघर्ष गरिरहँदा
बन्न भ्याइएन बाआमाको लाठी,
उनका दुःख अझै गएकै छैन
छोरा बन्न सकेको छैन अझै
ठाडो पारेर बाबुको शीर
‘म छोरा’ भन्न सकेको छैन अझै
दाजुको हात समातेर हिँड्न सिकियो
बाँकी बाटो खन्न बाँकी नै छ
भाइलाई देखाउन नयाँ बाटो
आफैँ उदाहरण बन्न बाँकी नै छ
सपनाहरू थाँती छन् कैयौँ
अझै पूरा भएकै छैन
यात्रा थालेको वर्षौँ भयो
लक्ष्य अझै पाएकै छैन
बित्दै जान्छ समय,
बढ्दै जान्छ उमेर,
उमेरले मात्र आफूलाई
बूढो बनाएर के गर्नु ?
भेटिएको छैन अझै,
व्यर्थै खुसी मनाएर के गर्नु ?
प्रस्तुतिः एकल यात्री3प्रतिक्रिया
वर्ग/समूहः कविता, जिन्दगीका भोगाइहरू
प्रस्तुतिः एकल यात्री2प्रतिक्रिया
गाली गर्ने मिस हुन्न
लट्ठी बोक्ने सर हुन्न
हाम्लाई माया मन पर्छ
मुटु काम्ने डर हुन्न ।
आँखा तर्ने बाबा हुन्न
हप्काउने आमा हुन्न
मनको कुरा भन्दाखेरि
नसुन्दिने घर हुन्न
नपढाउने दिदी हुन्न
नसिकाउने दाइ हुन्न
मायाले नै सिक्छौँ हामी
जबर्जस्ती कर हुन्न
आँखा चिम्लिएर सोच्यो
कसरी सुरु गर्ने यो बिहान ?
नाडीको घडी हेर्‍यो
सुरु भैसकेछ दिन
उसले फेरि सोच्यो
कसरी उपयोग गर्ने यो दिन ?
भित्ताको घडीमा आँखा ठोक्किए
उसले अझै सोच्यो
कसरी जोगाउने यो साँझ ?
झ्यालबाट चिहायो बाहिर
ऊ पल्टियो ओछ्यानमा र
फेरि सोच्न थाल्यो
आँखा लागे र
भुसुक्क निदायो ।
(सोच्दासोच्दै ढिलो भएछ ब्लग अपडेट गर्न । सोच्दैछु, अब के गर्ने ?)
दुर्घटना अझै टरेको छैन
कता लगेर ठोक्काउने हो ?
मनको डर मरेको छैन ।
भर्ना गर्नु छ नयाँ ड्राइभर
पुरानो ड्राइभर झरेको छैन ।
हाँकिरहेछ गाडी लाइसेन्सबिनाको ड्राइभरले
होसियार यात्रुहरू !
दुर्घटना अझै टरेको छैन ।
प्रस्तुतिः friendlyniraj3प्रतिक्रिया
मिल्कायौ मैनबत्तीका बचेका टुक्राहरू फोहोरसँगै
खन्यायौ मट्टीतेलहरू नालीमा
कहाँ हट्छ र अँध्यारो सँधैका लागि ?
कहाँ भाग्छ र रात नफर्किने गरी ?
छोप्न सक्छ कुहिरोले धरती
ढाक्न सक्छ बादलले आकाश
चुँडायौ बिजुलीका तारहरू घरबाट ।
फेरि डुब्दैछ सूर्य
हुँदैछ कालो रात
अब कसरी लड्छौ तिमी अँध्यारोसँग ?
च्यातिएको चोली टालटुल गरेर
नाङ्गा पाखुरा छाप्ने तरखरमा लाग्दा मेरी हजुरआमा
यौवन देखाउँदै डुल्दै थिइन् ।
भारी बोकेर काँधमा
देउरालीको उकाली चढ्दै गर्दा मेरी आमा
र्‍याम्पमा क्याटवाकमा हिँड्दै थिइन् ।
आफ्ना सुकेका स्तन चुसाइरहँदा मेरी दिदी
सौन्दर्य बिग्रने डरले
बच्चालाई बोतलको दूध
पिलाइरहेकी थिइन् ।
कलम समाउने हातले
गिटी कुट्दै गर्दा मेरी बहिनी
Chat मा Romance का गफमा
मस्त थिइन् ।
विदेशिएको बेला म
घरमा लुटिँदा मेरी सँगिनी
ग्राहकसँग आफ्नो शरीरको
मोलमोलाइमा व्यस्त थिइन् ।
कसलाई म नारी देखूँ ?
भन, कसको कथा रचूँ म ?
कुन नारीको कविता लेखूँ ?
सन्दर्भः ८ मार्च (अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस)
थु ... थु ... थुइक्क !
उफ्, आज office जानु नपरे पनि हुन्थ्यो । फर्किँदाको गाह्रोले बिहान college पनि गइनँ । १/२ दिन पढाइ छुटे छुटोस् भन्ने लाग्यो । तर हिजो एक दिन office नजाँदा मोबाइलमा complain आइसक्यो । साथीहरूसँग ‘ job गर्छु ’ भनेर फूर्ति गर्नु मात्र त हो । साहूको काम न ठहरियो, कुन बेला निकालिन्छु, कल्लाई के थाहा ? तर म अझै केही दिन office जान सक्दिनँ । थुइक्क, यो कस्तो विवशता !
घरबाहिर निस्किने स्थिति नै छैन । साथीको note copy सार्न ल्याएकी, फिर्ता गर्न जानुपर्थ्यो। कसरी जानु ? देखिरा’छु झ्यालबाट, सडकका दायाँबायाँ लहरै, अनि चोकैमा हूल बाँधेर बसेका छन् केटाहरू हातमा लोला बोकेर । जब कुनै महिला त्यही बाटो भएर हिँड्छन्, केटाहरूको लोला बर्सिन्छ तिनमाथि । अनि सुरु हुन्छ भागदौड । थुइक्क, कस्तो विडम्बना !
भर्खर मात्र । भर्खर त हो, एउटी महिला त्यही चोकमा आइपुगिन् हिँड्दै । कताबाट एउटा लोला उनको ढाडैमा बज्रियो । सम्भावित अरु आक्रमणबाट बच्न उनले छिट्छिटो पाइला चालिन् । तर जब चारैतिरबाट लोला बर्सिन सुरु भयो, उनले नभागी सुख पाइनन् । त्यही बेला उनको चप्पल चुँडियो । उनी भूइँमा पछारिइन् । हातले थाम्ने कोसिस गर्दागर्दै उनको घूँडा नराम्ररी सडकमा जोतियो । उनले वरिपरि हेरिन् र तथानाम् गाली गरिन् -
‘तिमेर्लाई मुर्दार , तिमेरुका आमालाई लोला हान् । दिदी बहिनीलाई छ्याप पानी, किन छ्याप्छस् ए ... का छाउरा बाटोमा हिँड्नेलाई ....’
प्रतिक्रियामा हाँसो गुन्जियो तिनै लोला आक्रमणकारी केटाहरूको । बाँकी सब रमिते बने । उनी रुन मात्र सकिनन् । लडेको ठाउँबाट उठिन् र खुट्टा खोच्याउँदै आफ्नो बाटो लागिन् ।
‘ए हान् हान ...’ पछाडिबाट अझै आवाज आउँदै थियो । थुइक्क आवारा केटाहरू !
एकैछिनमा अर्की युवती टी–सर्ट र पाइन्टमा ठाँटिएर त्यही बाटो आइपुगिन् । केटाहरू हातमा लोला बोकेर तिनको पुट्ठालाई ताक्दै stand by भए । युवती निहुरिन् र सडकको ढुङ्गो टिपिन् । केटाहरू हच्किए र उनलाई नदेखेझैँ गरे । एक्कासी कुनै घरको छतबाट पानीको पोका झर्‍यो र कालो लेदो पानीले उनको स्नान गरिदियो । उनले रिसले आँखा देखिनन् क्यार, ढुङ्गा उचालिन् र माथितिर हुत्याइन् । कुन घरमा ढुङ्गा बज्रियो थाहा भएन, तर ‘झर्‍या‍म्म’ को आवाज टाढैसम्म प्रष्ट सुनियो । उनलाई सन्तोष लाग्यो शायद, गर्वको पाइला चालेर अघि बढिन् । वाह् ! उनको साहसको प्रशंसा गर्न मन लाग्यो । तर आफूमाथि घटेको हिजोको घटना सम्झिँदा आफैँमाथि दया लाग्यो । दिनभरि घरैमा भएकीले दिउँसोको घाममा नुहाएर साँझ तरकारी किन्न घरनजिकैको त्यही चोकको पसलमा पुगेँ । तरकारी किनेर फर्किँदै थिएँ, कसैले हानेको लोला मेरो हातैमा लाग्यो । हातमा समातेको झोला फुत्कियो र तरकारी भूइँमा छरिए । म चूपचाप तरकारी बटुल्न थालेँ । एउटा लोला मेरो टाउकैमा बज्रियो । टाउको फन्फनी घुम्यो । आँखा अगाडि अँध्यारो छायो । एकैछिन दुवै हातले टाउको समातेँ । अलि हल्का भएपछि कतै नहरी कुदेर घरभित्र छिरेँ । थुइक्क म लाछी, डरपोक !
मुटु अझै जोडले हल्लिरहेको थियो । स्वास छिट्छिटो चलिरहेको थियो । टाउको दुख्न छाडेको थिएन । यसो टाउको छामेँ । चोट त लागेको थिएन, तर टाउको छुनेबित्तिकै ह्वास्स दुर्गन्ध नाकैका ठोक्कियो । अनि फेरि कपडा खोलेर नुहाउन गएँ ।
यी सब घटना बाबजुद म कसरी जाऊँ office ? होली झन् झन् नजिकिँदै छ र सडकमा लोला आतंक बढ्दैछ । जागिर गए जाओस्, पढाइ बिग्रे बिग्रोस्, office, college कहीँ पनि जान्नँ । सडकमा लोला आतंक देखेर आफैँले संकटकाल घोषणा गरेँ र आफैँलाई नजरबन्द गरेँ घरभित्रै । यही बेला मनमा प्रश्न उब्जियोः कसले चलायो यो होली ? किन चलायो ? के यही हो त हाम्रो संस्कृति ? यही हो हाम्रो चाड ?
थु... थु... थुइक्क होली ।
छोपेर आफ्नै अनुहार
‘सञ्चै हुनुहुन्छ ?’ बाटोमा हिँड्दै गर्दा एक्कासी उनलाई देखेपछि औपचारिकता निभाउनकै लागि भए पनि मुसुक्क हाँसेर मैले सोधेँ ।
उनले मलाई देखिनन् र मैले बोलेको सुनिनन्, चूपचाप अघि बढिन् । म पनि आफ्नै बाटो लागेँ ।
उही समय, उही ठाउँ, उसैगरी भोलिपल्ट फेरि उनीसँग भेट भयो ।
‘कता हिँड्नुभयो ?’ अलि ठूलै स्वरमा सोधेँ । उनले आज पनि मलाई देखिनन् र मलाई सुनिनन् । आफैँलाई लाज लाग्यो । वरिपरि नियालेँ –‘कसैले हेरिरहेको पो छ कि ?’ अनि लुसुक्क लागेँ आफ्नो बाटो ।
नियमित भेट हुन थाल्यो, उनीसित । बोल्न छाडे पनि मुसुक्क हाँसेर मैले आफ्नो कर्तव्य निभाएँ । उनले हाँसोको जवाफ दिइनन् ।
‘उनी’ एक पात्र हुन् ।
‘उनी’ मेरी स्कूलकी classmate, अफिसकी साथी, अनि कुनै समय मैले पढाएकी विद्यार्थी ।
‘उनी’ स्कूलका राम्रा साथीमध्ये एक थिइन् । पढाइमा गारोसारोमा एकले अर्कालाई सघाउनु हाम्रो नियमितता थियो । आज हामी फरक फरक college मा पढ्छौँ । कतै बाटोमा भेट भइहाले ‘उनी’ मुन्टो फर्काउँछिन् ।
‘उनी’ अफिसमा राम्रै सहयोगी थिइन् । आज मैले आफ्नो कार्यक्षेत्र बदलेँ । कहिलेकाहीँ सामुन्ने पर्दा टाउको लुकाउँछिन् र बाटो लाग्छिन् ।
‘उनी’ अस्तिसम्म मैले पढाउँदा साह्रै आत्मीय थिइन् ।
‘सर, यो कसरी ? यो के हो ?’ नबुझेका कुरा फोन गरेरै पनि सोध्थिन् । class सिद्धिएको एक हप्ता बितेको छैन, आज मलाई देखिहालिन् भने बाटो काट्छिन् र अर्कै साइडबाट हिँड्छिन् ।
‘उनी’सँगको प्रत्येक भेट वा देखाइमा म प्रत्येक पल्ट मुसुक्क हाँस्छु र हाँसोको जवाफ नपाएपछि लज्जित हुँदै आफ्नो बाटो लाग्छु ।
स्कूल, कलेज वा अफिसमा सँगै हुँदा राम्रै व्यवहार गर्ने ‘उनी’हरू किन बाटोमा भेट्दा नदेखेझैँ गर्छन् ? मैले मुसुक्क हाँस्दा किन हाँसोको जवाफै नदिई मुन्टो बटार्छन् ?
मलाई बाटोमा भेट्दा ‘उनी’हरूलाई पर्ने अप्ठोरो देखेर म आफैँ अप्ठेरो महसूस गर्न थालेको छु । त्यसैले आजभोलि म मास्क लाएर हिँड्छु, छोपेर आफ्नै अनुहार । ता कि मलाई बाटोमा भेट्दा मलाई नचिन्न ‘उनी’हरूलाई सजिलो होस् र ‘उनी’हरूले मुन्टो फर्काउनु नपरोस् ।
वर्ग/समूहः जिन्दगीका भोगाइहरू, निबन्ध